Fifandraisana ara-diplaomatika : Hosokafana ny masoivoho Malagasy any Londres -
AccueilRaharaham-pirenenaFifandraisana ara-diplaomatika : Hosokafana ny masoivoho Malagasy any Londres
Ny faran’ny herinandro lasa teo no nanainga hihazo an’i Londres, renivohitr’i Angleterre ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ireo delegasionina izay niara-dia aminy, tanjona amin’ity dian’ny filoham-pirenena ity moa ny fanokafana ny masoivohon’i Madagasikara ao Londres. Taorian’ny fandraisan’ny minisitra vaovao ny toerany, dia efa napetraka ny fanamby amin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’i Madagasikara amin’ ireo firenena any ivelany, indrindra eo amin’ny firenena izay hanampy ny fanatsarana ny toe-karena Malagasy. Tsara fototra hatrany tokoa raha ny fifandraisana ara-diplaomatika eo amin’ny firenena roa tonta, anton’izao fanamafisana amin’ny alalan’ny fametrahana ny masoivoho Malagasy any an-toerana izao. Raha tsiahivina ny tantara dia efa hatrany amin’ny roanjato taona lasa no efa nisy io fifandraisana io, tamin’ny alalan’ny fidiran’ireo misionera LMS teto Madagasikara io, izay vao nankalazaina niaraka tamin’ny mpino FJKM tany Antsiranana farany teo.
Ny taona 2012 ihany koa no nanokafana indray ny masoivoho Anglisy eto Antananarivo izay etsy Ankorondrano no misy ny foibeny , ary tsy izay ihany fa ahitana ny kaonsily Anglisy ihany koa any Toamasina. Efa maro ihany koa ny fiaraha-miasa sy ny fanampiana azo amin’ny firenena Anglisy ho an’i Madagasikara, izany dia amin’ny alalan’ ireo tetikasa toa ny fiaraha-miasa amin’ny UNICEF izay namatsian’ izy ireo vola 16,9 tapitrisa livres ho an’ ireo izay tratry ny hain-tany ny volana desambra 2016. Eo amin’ny lafin’ny ara-barotra kosa indray, raha ny tamin’ny taona 2015 no jerena dia 16,4 tapitrisa livres sterling no teti-bidin’ny entana avy any Angletera tonga teto Madagasikara ary 61,4 livres sterling kosa ho an’ny entana avy eto Madagasikara mankany Grandes Bretagnes. Ny taona 2010 dia nanompanan’izy ireo ny famatsiam-bola ny ady atao amin’ireo jiolahin-tsambo izay mitentina hatrany amin’ ny 17 tapitrisa livres sterling ny fanampiana, io izay nahafahan’i Madagasikara nahazo fitaovana maro ahafahana miambina ny morontsiraka.